Ny fitomboan'ny tsena Generator Diesel dia tsy maintsy mitombo telo noho ny fanavaozana ny haitao
Diesel generator no fitaovana ampiasaina hamokarana herinaratra avy amin'ny angovo mekanika, izay azo avy amin'ny fandoroana diesel na biodiesel. Ny motera diesel dia misy motera fandoroana anaty, mpamokatra herinaratra, fitambarana mekanika, mpanitsy herinaratra ary mpanara-maso hafainganana. Th ...
Ny andraikitry ny mpamokatra gazoala dia nametraka sensor sensor
Amin'ny dingan'ny fampiasana generator gazoala, ny mpanjifa dia tokony handinika ny hafanan'ny coolant sy ny solika, maro ny mpanjifa no manana an'io fanontaniana io, ahoana ny fanaraha-maso ny mari-pana? Mila mitondra thermometre miaraka aminao ve ianao? Tena tsotra ny valiny, ny fametrahana sensor ho an'ny ...
Izay rehetra tokony ho fantatrao alohan'ny hividianana Diesel Generator iray
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-04-19
Inona no atao hoe Generator Diesel? Generator diesel no ampiasaina hiteraka angovo herinaratra amin'ny alàlan'ny fampiasana motera diesel miaraka amina generator elektrika. Ny generator diesel dia azo ampiasaina ho toy ny famatsiana herinaratra maika raha sendra tapaka ny herinaratra na amin'ny toerana tsy misy ifandraisany amin'ny tariby herinaratra. Karazan-...
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-04-12
Inona no mahasamihafa ny kW sy ny kVa? Ny fahasamihafana voalohany eo amin'ny kW (kilowatt) sy kVA (kilovolt-ampere) dia ny herin'ny herinaratra. Ny kW dia singa misy ny tena tanjaka ary ny kVA dia singa iray misy hery hita maso (na hery tena izy miampy hery miasa indray). Ny anton-kery, raha tsy voafaritra sy fantatra dia ...
ANALYSISA NY anton'izany amin'ny fampitomboana ny fihenan'ny menaka jeneraly DIESEL
avy amin'ny admin tamin'ny 21-04-07
Aiza no alehan'ny fanjifana solika an'ny mpamokatra gazoala? Ny ampahany aminy dia mihazakazaka mankeny amin'ny efitrano fandoroana noho ny fanodinkodinana solika ary may na mamorona karbonina, ary ny ampahany hafa kosa mivoaka avy eo amin'ilay toerana tsy mafy ny tombo-kase. Ny menaka mpamokatra diesel amin'ny ankapobeny dia miditra ao amin'ny efitrano fandoroana amin'ny alàlan'ny ...
Dingana valo ilaina amin'ny fikojakojana ny gazoala
Ny fikojakojana ny gazoala diesel dia fanalahidy hahazoana antoka fa hihazakazaka mandritra ny taona maro ny fitaovanao ary tena ilaina ireo hevi-dehibe 8 ireo. Fanaraha-maso amin'ny fomba mahazatra ny Generator Diesel Mandritra ny fizotran'ny mpamokatra gazoala, ny rafitra fanodinana, ny rafitra misy solika, ny rafitra elektrika DC ary engi ...
Fikojakojana entana an'ny Generator Diesel
Rehefa tsy mahomby ny tariby elektrika dia tsy midika izany fa afaka manao izany koa ianao. Tsy mety velively izany ary mety hitranga rehefa eo ny asa lehibe. Rehefa tsy mahandry ny herinaratra ary tsy mahandry ny famokarana vanim-potoana dia mitodika any amin'ny mpamokatra diesel anao ianao hampandeha ny fitaovana sy ny fotodrafitrasa ...
Ny hafanan'ny motera diesel dia avo loatra. Afaka esorina ve ny termostat?
Ahoana ny fomba fiasan'ny termostat amin'izao fotoana izao, ny motera diesel dia mampiasa thermostat savoka amin'ny fahombiazan'ny asa maharitra. Rehefa ambany kokoa ny mari-pana amin'ny rano mangatsiaka noho ny mari-pana naoty dia mihidy ny valizy termostat ary ny rano mangatsiaka dia azo zaraina amin'ny motera diesel ao anaty wa kely ...
Tsarà fetin'ny vehivavy iraisampirenena
Tratry ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy! Misaotra an'ireo vehivavy mpiara-miasa amintsika rehetra. Hongfu Power dia mirary vehivavy manankarena rehetra ho anao, manan-karena ara-panahy: tsy misy taratra, be fanantenana, falifaly, tia manankarena: matetika dia manana toetra mahafinaritra sy matoky tena; manankarena: ary ny fiainana manonofinofy, no miandraikitra irery. Mirary tontolo andro sambatra ho an'ny vehivavy!
Hongfu Power dia mitarika anao amin'ny fomba hahatonga ny genset hijanona amin'ny fahombiazana lehibe
Ireo tobim-pamokarana herinaratra mahaleo tena novokarin'i Hongfu Power dia nahita ny fampiharana azy ireo anio, na amin'ny fiainana andavanandro na amin'ny famokarana indostrialy. Ary ny hividianana génerie diesel AJ dia atolotra ho loharano lehibe sy ho backup. Ny singa toy izany dia ampiasaina hanomezana herinaratra ho an'ny indostria na olona ...
Ahoana ny fomba hampihenana ny maripanan'ny rivotra fidiran'ny lasantsy mpamokatra diesel
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-01-11
Ahoana ny fomba hampihenana ny mari-pana entin'ny rivotra an'ny mpamokatra gazoala Diesel dia miasa ny maripana anatiny, avo be ny mari-pana coil anatiny, raha toa ka avo loatra ny mari-pana amin'ny rivotra dia hitarika amin'ny fanaparitahana ny hafanana dia tsy mety, hisy fiantraikany amin'ny fiasan'ilay singa , ary mampihena ny servi aza ...
Manomboka amin'ny famoronana karazan-jaza any Lincolnshire, UK ka hatramin'ny fampiharana ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany Karaiba
avy amin'ny admin tamin'ny 21-01-04
Raha ny mpamorona genset manerantany ao Lincolnshire, UK, Welland Power, dia mila mpanelanelana 4 x Critical Standby ho an'ny Kontraktoran'ny harena ankibon'ny tany any Karaiba fa tsy mila mijery lavitra loatra izy ireo. Niorina tamin'ny lazan'ny kalitao sy ny fahamendrehana miampy ny fiaraha-miasa miasa mandritra ny 25 taona. Manokana ny ...
Generator kely, Magnetic Power Generator, Generator 125kva, 200kw Generator, Vidin'ny Generator, Generator 240kw,
Arakaraka ny filanao dia amboary ho anao, ary omeo vokatra sarobidy kokoa ianao